Ny fiainana tsara indrindra amin'ny pelaka ao Bangkok | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | Bangkok, Ocio, Tailandia, Fitsangatsanganana any Azia
Bangkok io no renivohitr'i Thailand, firenena heverin'ny mpandeha maro ho iray amin'ny toeran-kaleha tsara indrindra any Azia raha zavatra roa no resahina: torapasika mahatalanjona sy fiainana amin'ny alina.
Mpizahatany maro no mihevitra an'i Bangkok ho ilay Mekkah an'ny fizahan-tany pelaka any Azia satria misy maro fisotroana, saunas ary alim-pandihizana pelaka Ka raha tianao ny hitsangatsangana sy hanambatra ny torapasika, fizahan-tany mora vidy (tsy firenena lafo vidy i Thailand), ny kolontsaina sy ny fiainana amin'ny alina dia azo inoana fa ho voalohany eo amin'ilay lalana.
Ny tontolo no manao ny tanàna ary ny tanàna manao ny endrika. Bangkok Eo amin'ny faritry ny Reniranon'i Chao Phraya no misy azy, any amin'ny afovoan-tany, ary mponina eo amin'ny valo tapitrisa eo ny olona onenana fa any amin'ny faritra amoron-tsiraka dia misy olona roa heny.
Na dia nanomboka ny taonjato faha-XNUMX sy ny fue tamin'ny taonjato faha-XNUMX dia lasa ivon'ny faritany izy, avy eo nantsoina hoe Siam, ny fanavaozana lehibe ny tanàna dia natao tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Toy ny mahazatra rehefa misy tanàna mitombo tsy voafehy na tetikasa, ny vokany dia zavatra tsy misy firafitra, tsy ampy ny serivisy ampahibemaso ary mikorontana be.
Mandritra ny fotoana fohy izao nametraka fanatsarana vitsivitsy ny governemanta, indrindra ny fitaterana, saingy be dia be ny olona miara-monina, be tabataba, jiro neon maro, ka hanaitra anao ny Bangkok, na dia eny aza, heveriko fa amin'ny alina dia hampifalifaly anao betsaka izany.
Fiainana amin'ny alina any Bangkok
Any Bangkok dia misy bara, klioba ary sauna maro iray amin'ireo tanàna tsara indrindra eran'izao tontolo izao ny mivoaka alina amin'ny ankapobeny na ny manao pelaka manokana. Ny fiainana any Bangkok dia manan-daza ho tia bibidia fa tokony holazaina fa tsy toy ny taloha intsony izy io satria tato anatin'ny taona vitsivitsy dia nametraka fanamafisam-peo ny governemanta amin'ny fanarahana ny lalàna mifehy ny fampiasana zava-mahadomelina, ny fitanjahana, ny fandaharam-potoana ary ny hafa.
Androany ny ankamaroan'ny bara, disko ary trano fisakafoanana tsy maintsy mihidy alohan'ny 1 maraina ary vitsivitsy dia avela hanohy hatramin'ny 2 maraina. Ny bara tsy ara-potoana misimisy kokoa dia misokatra mandritra ny alina, eny, fa tsy ireo izay mandamina kokoa. Amin'ny maha mpizahatany antsika dia tsy maintsy ento foana ny pasipaoronao satria afaka mangataka izany ny polisy na miditra amin'ny bara na disko, mampirehitra jiro, mangataka antontan-taratasy ary manao fitsapana zava-mahadomelina mihitsy aza. Tsy matetika, tsy matetika, fa mety hitranga izany.
Ny hetsika, ivon'ny fiainam-pianakaviana gay rehetra, mijanona eo Silom. Ny tanàna rehetra dia samy manana ny toeran'ny pelaka ary Silom no zava-drehetra eto. Ny zava-drehetra. Eo amin'ny araben'i Silom no ahitanao trano fisakafoanana, trano fisotroana, hotely lafo vidy, trano ambony mitaingina lanitra ary fivarotana an-jatony eny an-dalambe izay mifantoka amin'ny toerana maro sy ny vahiny.
Ny fivarotana dia mivarotra kely amin'ny zava-drehetra, manomboka amin'ny akanjo ka hatramin'ny sakafo, amin'ny vidiny mirary. Tsy hoe pelaka ity toerana iray manontolo ity, noho izany dia tsy maintsy manondro ireo arabe lehibe ianao: Silom Soi 2, Soi 4 ​​ary Soi Twilight.
Ny voalohany dia tsotra lalana misy klioban'ny pelaka maromaro, eo amin'izy ireo no malaza indrindra rehetra, ny Station DJ. Eo am-baravarana, izay maimaim-poana, izy ireo dia manamarina ny kitaponao fa ny zavatra tsara dia izany ny vidiny dia mitovy amin'ny bara rehetra Ary afaka mandeha isaky ny bar ianao amin'ny fitaratra eo am-pelatananao na aiza na aiza no nividiananao azy. Somary iraisam-pirenena ny mozika ary mifangaro ny mpijery. Misy foana ny olona, ​​na dia betsaka kokoa aza amin'ny faran'ny herinandro.
Ny disko izay tsy azonao adino dia Tobin'i Dj. Misy rihana telo izy io ary misy ny fampisehoana ny Tadiavo ireo mpanjakavavy ka io no toerana malaza indrindra eto an-tanàna. Azonao atao ny mitondra ny BTS mankany amin'ny Chong Nonsi Station na Sala Daeng, na afaka mandray ny MRT mankany amin'ny Station Silom ianao. Avy eo ny disko dia dingana vitsivitsy miala eo. Mikatona eo anelanelan'ny 3 sy 4 maraina izy io matetika. ary ny fidirana dia mora kokoa amin'ny andavanandro, miaraka amin'ny fisotroana maimaim-poana iray, ary lafo kokoa amin'ny faran'ny herinandro amin'ny fisotroana roa.
Hafa ireo trano fandihizana amin'ny Silom:
Lucifers Disko: olona manana tandroka, mozika elektronika. Misokatra isan'andro izy manomboka amin'ny 7 hariva ka hatramin'ny 2 maraina. Maimaimpoana ny fidirana.
Soi Thaniya: ny vibe eto dia Japoney. Any Patpong dia misy bara sy trano fisakafoanana japoney betsaka fa tsy midika izany fa toerana ho an'ny Japoney izy io.
9 Night Club: Misy rihana telo sy olona marobe izy io. Manana fampisehoana mpanjakavavy dragona be glamorous izy io. Misokatra isan'andro manomboka amin'ny 7 hariva.
Tapas: toerana mahafinaritra ny pelaka fa tsy pelaka.
Ny arabe pelaka faharoa dia nantsoina Silom Soi 4, arabe fohy feno bara gay. Mety ny hipetraka miaraka amin'ny fisotroana ary hijery ny fandalovan'ny olona. Mipoaka ny fahafinaretana eo anelanelan'ny 9 alina sy 12 ora maraina ary io no tranonkala mahazatra hanombohana ny alina alohan'ny handihizana. Ny bara faran'izay be indrindra dia ny Barcond Barm the Thephone sy ny Stranger Bar.
Ny distrika jiro mena any Bangkok dia Soi Twilight na Soi Pratuchai. Mandehana mandeha bara, fampisehoana zazalahy y mpikapoka ary izany karazan-javatra izany. Amin'ny ankamaroany dia mieritreritra fizahan-tany vahiny ny zava-drehetra. Feno jiro neon na aiza na aiza ary ny olona marobe ny tontolo, ka ny marina dia tsy azo odian-tsy hita ity toerana ity.
Ny tsara indrindra dia ny Seho Thai mitafy toy ny Cowboys, na saika mitafy dia azonay lazaina. Iray amin'ireo seho tsara indrindra Bangkok Boys. Vatana mitanjaka? Ilay tolotra jerena? Soi Twilight ity.
Raha fintinina, ny tokony ho mazava aminao raha hanao fizahantany pelaka ao Bangkok ianao fa misy toerana telo azo tsidihina amin'ny alina ary afaka mitsidika azy rehetra ianao amin'ny andro iray ... na dia tiako aza ny fatra.
Silom Soi 4 ​​dia ny làlan'ny bara gay, Silom Soi 2 ny araben'ny discos gay ary Soi Twilight ny làlan'ny firaisana. Inona no tadiavinao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Bangkok » Ny fiainana tsara indrindra amin'ny pelaka ao Bangkok